Dowlada Sweden oo Fududeesay Xayiraado hore u jiray kuwa kale kordhisay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDowlada Sweden oo Fududeesay Xayiraado hore u jiray kuwa kale kordhisay
Dowlada Sweden oo Fududeesay Xayiraado hore u jiray kuwa kale kordhisay
January 21, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden, Warka ugu akhriska badan 0
Dowlada Sweden ayaa go’aamisay subaxnimadan maanta oo khamiis ah in la fududeeyo xayiraadaha la xiriira dugsiyada sare, loona ogolaado daraasadaha laga sameeyo iskuulada taaso oo ka dhigan in iskuulada la tagayo iyo Masaafada leesku wado.
Go’aanka ayaa yimid shir jaraa’id oo ay si wada jir ah hada u qabteen raiisul wasaare Stefan Leuven isaga iyo tiro wasiiro ah.
Leuven wuxuu yiri iskuuladu waa inay awoodaan inay wax ku bartaan dhismayaasha iskuulka iyadoo ay jirto masaafo fog isla waqtigaas.
Si kastaba ha noqotee, go’aanka ayaa u oggolaanaya degmooyinku inay gebi ahaanba xiraan dugsiyada sare, haddii loo baahdo, haddii ay dhacdo faafitaan badan oo jira.
Go’aanka cusub ayaa dhaqan galaya laga bilaabo Isniinta soo socota, illaa iyo 1da Abriil.
Wasiirka waxbarashada Anna Ekstrom ayaa sheegtay in ujeedka go aankan uu yahay in la isku daro nidaamka waxbarashada masaafada iyo waxbarashada iskuulada.
Dowladda ayaa sidoo kale qaadatay go’aano kale, oo ay ka mid tahay kordhinta mamnuuca ah in lagu cabbo khamriga baararka iyo maqaayadaha wixii ka dambeeya sideeda fiidnimo ilaa 7-da Febraayo, dowladduna waxay ku boorisay dowladaha hoose in ay xiraan howlaha aan muhiimka aheyn ilaa 7-da Febraayo sidoo kale
Marka la eego xirashada waji-xirashada gaadiidka dadweynaha inta lagu jiro xilliyada subaxnimada iyo fiidka, talo soo jeedintooda ku aaddan isticmaalkooda ayaa la kordhiyay illaa guga soo socda.
Dhinaceeda, Wasiirka Dhaqanka Amanda Lind ayaa ugu yeedhay shirkii jaraa’id ee iskuulada iyo ururada dhaqanka in ay dib u bilaabaan howlihii loo qaban jiray caruurta iyo dhalinyarada qaangaadhka ah, hadii ay suurta gal tahay, waa hadii ay u hogaansamaan shuruudaha iyo nidaamka Maamulka Caafimaadka Bulshada.
In kasta oo laga khafiifiyey xayiraadihii, Wasiirka Arrimaha Bulshada, Lena Hallingrin, waxay ka digtay u hoggaansamida habacsanaanta shuruudaha kala fogaynta bulshada iyo hababka Maamulka Caafimaadka, waxayna tidhi “weli xaaladdu waa khatar.”
Shaqada guriga, wasiirka shaqada Eva Nordmak ayaa ka sheegtay shirka jaraaid inay muhiim tahay in guriga laga shaqeeyo hadii ay suurta gal tahay.
Wasiirka ayaa amaanay loo shaqeeyayaasha ka shaqeeya dowlada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay, wuxuuna sheegay inay si dhab ah u qaateen talooyinka dowlada iyo hey’ada caafimaadka bulshada.
Waxay carabka ku adkeysay in dowlada ay u xilsaartay hey’ada bay’ada shaqada inay dib u eegis ku sameyso goobaha shaqada u hogaansanaanta sharciyada xakameynta cudurka.
Leuven wuxuu sheegay in dowladdu ay dib u eegis ku sameyn doonto xayiraadaha labadii Isbuucba mar